जीवन तथा स्वास्थ्य :: a1nepal.com.np :: Page 2
March 4, 2018 Recommendation, जीवन तथा स्वास्थ्य, देश भित्र, विविध सामाग्रीहरुRecommendnews section
देशमा बिकसित राजनीतिक घटनाक्रमले उनलाई चसक्क घोचेको छ । हुन त उनी आफै पनि राजनीतिमा सक्रिय रहेकी छिन् तरपनि राजनेता भनाउँदाहरुको ब्यबहारले उनको मन दुखेको छ । जनताको सेवक बन्नुपर्ने नेताहरु ब्यत्तिगत स्वार्थका रुमल्लिएका कारण देशको यो अबस्था आएको उनको बुझाई रहेको छ । उनी यो राजनीतिक माहोल सङिल्नेमा बिश्वस्त .....
लसुन-लभन् पाँच फाइदा, सुन्नुस म भन्छु!
March 3, 2018 जीवन तथा स्वास्थ्यpramukh, Recommendnews section
लसुन आफ्नो एन्टिअक्सिडेन्ट गुणको कारण कोलेस्टोरको स्तर नियन्त्रित राख्न उपयोगी हुन्छ । के पनि पाइएको छ भने, नियमित रुपले लसुन सेवन गर्दा उच्च रक्तचाप र ब्लड सुगर पनि नियन्त्रण भएको छ । .....
हड्डीका समस्याका हुनुका कारण के कस्ता हुन्छन?
February 27, 2018 जीवन तथा स्वास्थ्य, देश भित्रpramukh, Recommendnews section
हड्डी सम्बन्धि उपचार गर्ने चिकित्सकहरुका अनुसार गलत खानपान, विलासी जीवनशैली तथा अव्यवस्थित जीवनचर्याका कारण पनि हड्डी तथा जोर्नी सम्बन्धि समस्याबाट पिडित हुने गरेका छन् । जबकी सही खानपान तथा व्यवस्थित जीवनशैली मात्रले पनि यस्ता समस्या हुनबाट शरीरलाई बचाउन सकिन्छ । .....
बेजोडको टाउको दुख्ने (माइग्रेंन) भए के गर्ने?
माइग्रेनको टाउको दुखाई धेरै कारणले गर्दा बल्झन सक्छ । कति महिलामा महिनावारीको वरिपरि टाउको दुखाई बल्झन सक्छ । रक्सी , कालो चकलेट र चीज ले पनि माइग्रेनको टाउको दुखाई बल्झिन्छ । मौसम परिबर्तनले पनि माइग्रेनको टाउको दुखाई हुन्छ । त्यसैगरी अनिन्द्रा भयो वा अत्यधिक मात्रामा सुत्यो भने पनि माइग्रेनको टाउको दुखाई बल्झिन्छ .....
स्वस्थ्य जीवनको सात सूत्र – अत्यन्तै महत्वपुर्ण
February 26, 2018 जीवन तथा स्वास्थ्य, देश भित्रpramukh, Recommendnews section
व्यायामपछि सफा पानीले नुहाउनु राम्रो हो । व्यायामको क्रममा पसिना बग्ने भएकाले नुहाउनुपर्छ । नुहाउँदा टाउकोबाट सुरु गर्नुपर्छ । यद्यपी व्यायाम लगत्तै भने नुहाउनु हुँदैन । केहि समय आरम गरेर मात्र नुहाउनु राम्रो हो । .....
February 25, 2018 Recommendation, जीवन तथा स्वास्थ्य, देश भित्र, प्रमुख समाचार, फिचरpramukh, Recommendnews section
करेला सेवन स्वास्थ्यका लागि राम्रो मानिन्छ । कम्तीमा हप्तामा एक पटक करेला खानुपर्छ । किनभने अन्य सब्जीको तुलनामा यसमा धेरै औषधिय गुण हुन्छ । यो खाएपछि सजिलै .. .....
February 24, 2018 Recommendation, जीवन तथा स्वास्थ्य, देश भित्रpramukh, Recommendnews section
सबैको रक्तचाप २४ घन्टामा थपघट भैरहन्छ । रक्तचाप सधै १५०/९० रहन्छ भने त्यसलाई बढ्न नदिन औषधि सेवन गर्नुपर्छ । लामो समयसम्म औषधि सेवन नगरे मुटु, आँखा तथा मिर्गौलामा असर पर्नसक्छ । मुटु सुन्निने, आँखाको प्रेसर बढ्ने तथा मिर्गौलाको कार्यक्षमतामा ह्रास आउने हुन्छ । .....
पेट सफा हुँदैन ? यस्तो छ सजिलो उपचार
सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा राति सुत्नुभन्दा तीनघन्टा अगाडि नै खाइसक्नुपर्छ । अन्यथा क्यालोरी बर्न हुन पाउँदैन । खानामा फाइवरयुक्त कुराहरु अत्यधिक सेवन गर्नुपर्छ । यसबाट आन्द्राको राम्रोसँग सफाई हुन्छ । यसका अलावा दिनभरीमा ८ देखि १० गिलास पानी पिउनैपर्छ । साथै, दैनिक योग र व्यायाम गर्नु पनि आवश्यक छ । .....